कोरोनाको नयाँ खतरानाक प्रकार कहाँबाट आयो, कसरी थाहा भयो ? (पुरा जानकारी) - कोरोनाको नयाँ खतरानाक प्रकार कहाँबाट आयो, कसरी थाहा भयो ? (पुरा जानकारी) -
कोरोनाको नयाँ खतरानाक प्रकार कहाँबाट आयो, कसरी थाहा भयो ? (पुरा जानकारी)
उज्यालो प्रतिनिधि ७ पुष २०७७, मंगलवार दी फ्याक्ट
काठमाडौँ । जसरी कोभिड्-१९ चीनबाट सम्पूर्ण विश्वमा फैलियो यसको नयाँ प्रकार पनि बेलायतबाट डेनमार्कदेखि नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र इटाली जस्ता धेरै देशहरूमा फैलिएको छ । मिडिया रिपोर्ट अनुसार, नयाँ कोरोना भाइरस यी देशहरुमा पनि पुष्टि भएको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यो नयाँ प्रकारको भाइरस पहिले भन्दा ७० प्रतिशत बढी संक्रामक हुन सक्ने कुरा गरिसकेका छन । अब यसको संक्रामकता पनि देखिन्छ। आउनुहोस् हामी यस नयाँ प्रकारको कोरोना र भाइरसको उत्परिवर्तनसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण चीजहरू बताउँछौ ।
के भाइरसमा परिवर्तन भैरहेको छ ?
लीवरपूल यूनिवर्सिटीका इन्फेक्शन एंड ग्लोबल हेल्थ प्रोफेसर प्रो. जुलियन हिसकोक्सका अनुसार, ‘कोरोना भाइरसहरू सबै समयमा उत्परिवर्तन हुन्छन् । यदि कोभिड्-१९ को नयाँ प्रकारहरु उदय भइरहेको छ भने, यो नयाँ कुरा हैन । ‘ यद्यपि भाइरसको गम्भीर लक्षणहरूको बारेमा ठोस रूपमा केही भन्न सकिदैन।
कोरोनाको D614G संस्करण विश्वव्यापी रूपमा फेला
विज्ञहरू भन्छन कि गत वर्ष चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस फेला परेको थियो, यसले धेरै नयाँ रूपहरू देखेको छ। सबैभन्दा सामान्य प्रकारको भाइरस D614G हो। यो फेब्रुअरीमा युरोपमा फेला परेको थियो र हाल विश्वव्यापी कोरोनाको सबैभन्दा सामान्य पाइएको प्रकार हो।
यस बाहेक, कोरोनाको अर्को प्रकार पनि थियो जुन युरोपमा नै फैलियो। यसको नाम A222V थियो।
यो नयाँ किसिमको कोरोना कहाँबाट आयो ?
विज्ञहरू भन्छन कि नयाँ प्रकारको कोरोना बेलायतमा भेटिए धेरै परिवर्तन भएको छ। बीबीसीको रिपोर्ट अनुसार यसको कारण यो हुन सक्छ कि रोगीको शरीरमा यो नयाँ प्रकार परिवर्तन भएको थियो जसको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर थियो र भाइरस खतम गर्न नसक्ने हुन सक्छ। भाइरस त्यस्ता बिरामीहरूको शरीरमा बलियो भयो र यसको रूप परिवर्तन गर्‍यो।
यो नयाँ प्रकारको भाइरसको बारेमा कसरी थाहा भयो ?
एक रिपोर्टका अनुसार यो नयाँ प्रकारको कोरोन भाइरसको स्वाब टेस्टमा पत्ता लागेको थियो। बेलायतका चीफ मेडिकल अफिसर प्रोफेसर विट्टीले भने कि केन्ट र वरपरका क्षेत्रमा संक्रमितहरूको गत केही हप्तामा परीक्षण गरिएको थियो जसले नयाँ प्रकारको भाइरस पत्ता लगाएको थियो। यद्यपि वैज्ञानिकहरूसँग यसको बारेमा थोरै जानकारी छ, अध्ययन जारी छ।
के खोपले नयाँ प्रकारको भाइरसविरुद्ध काम गर्दछ ?
हाल वैज्ञानिकहरूसँग यस बारे बढी जानकारी छैन, तर यो विश्वास गरिन्छ कि खोपले यस नयाँ प्रकारको भाइरसलाई असर गर्दछ। विज्ञहरूका अनुसार बेलायतका व्यक्तिहरुलाई दिइने खोपले उनीहरूको प्रतिरोध क्षमता बलियो गर्दछ। यस्तो अवस्थामा भाइरसले आफ्नो रूप बदल्न र शरीरमा आक्रमण गर्न सक्छ तर खोपको प्रतिरोधात्मक शक्तिले यसलाई आक्रमण गर्न र यसलाई हटाउन सक्छ।
कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेपछी देखिन सक्छ यस्तो असर
“चीनमा भन्दा अगाडि अमेरिकामा फैलिएको थियो कोरोना”